Sound Engineer – NAB Show News by Broadcast Beat. Official Broadcaster of NAB Show, Producer of NAB Show LIVE
ikhaya » imisebenzi » Injineli
Ukuvula uYobhi: Injineli enezandi
inkampani: IYunivesithi yasePrinceton
Indawo: Princeton NJ US
I-Lewis Centre yezoBugcisa ifuna iNjineli yeNzululwazi yexesha elipheleleyo. Iinjineli zengqondo yinxalenye ebalulekileyo yeqela lokusebenza kwinqanaba. Ukubika kwi-Lighting ne-Stage Supervisor, kunye nokusebenza kunye neCandelo loPhando lweeTheatre, iqela lokusebenza kwinqanaba liyinxalenye yeqela elikhulu lokuvelisa, elibandakanya uMlawuli woPhicotho, uMphathi weZiko loPhicotho, uMlawuli wezoBuchule, uMphathi weCompume Shop kunye nabasebenzi bezitolo ezipheleleyo. Umviwa ofanelekileyo uya kulungelelanisa, agcine, kwaye asebenze izixhobo ezivakalayo kuzo zonke izikhala. Baya kuba nexanduva lokubethelwa, ukuguqulwa, kunye nokusekwa kwezixhobo ezivakalayo zokuhlaziya, iziganeko ezikhethekileyo kunye nemisebenzi. Baza kuhlola kwaye baqeqesha abasebenzi abaqhelekileyo kunye nabafundi kwizixhobo zokusebenza, ukhuseleko kunye nokuqhuba imigaqo-nkqubo yokusebenza. Ukongezelela, baya kubacebisa abaqulunqi bezandi abavakalayo kuyo yonke inkqubo yoyilo kunye ne-tech. Iinjineli zengqumbo ziya kuba yinto yonke yazo zonke izinto zokuphonononga iteksi, ukugqoka iimveliso kunye nokusebenza. Eli lixesha elipheleleyo, isikhundla seenyanga se-10 kunye neenzuzo ezipheleleyo zeenzuzo.
I-Lewis Centre yezoBugcisa ivelisa ngaphezu kweziganeko ze-100 ngonyaka, ezininzi zazo phantsi kweeNkqubo kwi-Theatre neMdaniso. Lezo zimbini iinkqubo zivelisa phakathi kwe-10 kunye ne-12 yemveliso rhoqo ngonyaka efuna iqela elipheleleyo lokuvelisa ukwenza. Ukongezelela, i-Lewis Centre yezoBugcisa ivula ubugcisa obutsha ngokuwa kwe-2017 nokwandisa imisebenzi yethu, izithuba zokusebenza kunye nabasebenzi. Inkundla yokudanisa ye-3,600-square-foot and seating flexible ukuya kwi-120 kunye ne-3,600-square-foot Ibhokisi emnyama Indawo yokuzigcina eneendawo eziguquguqukayo ukuya kwi-150 iya kwandisa isihlalo se-350 esikhona i-Berlind Theater. Isakhiwo esitsha siza kuba nezindlu zokudlala, ii-studio zokudansa, i-studio yoyilo, i-lab yokukhanyisa kunye nephiko lomculo elihlukile. Ukwandiswa nokongezwa kwezinto zobugcisa kunye ne teknoloji kubonelela ithuba lokwandisa ukufunda ngabafundi bethu kunye nethuba elihle lokuba umntu ofanelekileyo ajoyine iqela lethu lokuvelisa inxaxheba entsha kunye ebalulekileyo.
Sisebenzela njengeNjineli Yomsindo kuzo zonke izixhobo zomculo, ukudlala kunye nemveliso yokudanisa efuna ukuxubusha okuphilayo kwimida ye-wireless kunye nabaculi Ibhokisi leMnyama Iingingqi, iMateral Theater, i-Berlind Theater kunye ne-studios; Hlela, ugcine, kwaye usebenzise izixhobo ezivakalayo kuzo zonke iindawo ze-Theater kunye neNkqubo zoDaniso; Umsebenzi wokufaka umthwalo, ukuphuma kwemiphumo, ukuphonononga i-tech nokubonisa iifowuni; Gcina imidwebo kunye neempapasho ze-repertory ezicetywayo; Gcina ulwazi olunamandla olusebenzayo kuzo zonke iikhompyutha zobuchwephesha ezikhoyo, ngokugxininisa ubuchwepheshe bezandi kunye nevidiyo; Ukucebisa kwiinkqubo zezinto eziphathekayo kunye nevidiyo, ukuphuculwa kunye nokuphuculwa kweentengo; Ukugcina ubudlelwane obuhle bokusebenzisana nabathengisi; Ukunyanzeliswa kwemisebenzi ekhuselekileyo yokuqinisekisa ukuba indawo yokusebenza ephephile kubo bonke.
Qeqesha kwaye uhlolisise iirekhodi eziqhelekileyo kunye nabaqeqeshi bezemfundo kwi-sound operation kunye nokuqhuba imigaqo-nkqubo yokusebenza kuzo zonke izikhala zethu; Ukuqeqeshwa komzila ekukhanyeni kunye neenkqubo ze-A / V ukwenzela ukuba kusebenze ukukhanya okanye ividiyo kwiimpawu kunye neentlobo ezincinci; Ukukhonza njengomqhubi weBhodi yeZandi, uMqhubi weBhodi yokuKhanya okanye iCrew Run; Sebenza ngokusondeleyo kunye ne-faculty, abasebenzi, abaculi beendwendwe kunye nabafundi beSebe leMidlalo kunye neMdaniso ukugcina imigangatho ephakamileyo yokuba i-Lewis Centre yaziwa kuwo wonke uluntu.
Sebenza ngokusondeleyo nabafundi, abaqeqeshi bezakhono kunye nabavakalisi kuzo zonke iinkalo zenkqubo yoyilo; Ukuthatha inxaxheba ekufundiseni abaqingqi bezandi.
I-3 - i-5 iminyaka yamava
Ulwazi olubanzi losebenza kuyo yonke imiba yoyilo lobugcisa kunye nemveliso.
Ezizodwa, ulwazi ngezandla zesistim nezisandi. Ulwazi lweenkqubo ze-A / V kunye kunye. Wabonisa ubuchule kwiprogram kunye noxinzelelo lweentambo ze-CL CL ezenziwe ngokuzenzekelayo, ukurekhodwa kwerediyo kunye nobunjineli, nge-microphones ezinamathele kunye nezingenantambo. Ngokukodwa:
Yamaha CL1 kunye ne-3 mixing consoles, kunye ne-CL Editor V4
Shure ULXD4D protocols
Avid Pro Tools HD Ukurekhoda kwerekhodi yeThunderbolt
I-Newtek I-Tricaster 460 yokushicilelwa kwemveliso
Ulawulo lweCrestron kunye neenkqubo zokuhambisa
Unolwazi ngobunjineli obuphilayo obubonakalayo kwimveliso encinci nangaphezulu kwiindawo ezahlukeneyo.
Amandla okusebenza, ukukhathaza nokugcina iinkqubo ezahlukeneyo zesandi.
Isifiso kunye nokukwazi ukuqeqesha ngokukhanyisa, i-A / V kunye neenkqubo zokukhwela njengento efunekayo.
Izakhono zovandlakanyo ezibonakalisiweyo, unxibelelwano oluqinileyo kunye nolwazi olunxulumene noluntu, isimo sengqondo esifanelekileyo, umdlali weqela, izakhono zobambiswano, izakhono zokuxazulula iingxaki kunye nolwaphulo olukhulu.
Ukuzimelela, ukulungelelanisa kunye neenkcukacha ezijoliswe kuyo.
Ikhono lokwenza izigqibo ezinengqiqo kunye nexesha elifanelekileyo ngokuphendula kwimigqaliselo ephambili kunye nemingeni njengoko ivela.
Ikhono lokuhlangabezana nexesha elide kwaye usebenze kwindawo ehamba ngokukhawuleza.
Amandla okusebenza ishedyuli eyahluka kwiiveki ukuya kwiveki kwaye iquka ubusuku namaveki
Unolwazi kwiQLab, iVectorworks, iGoogle Drive kunye ne-Microsoft Office.
BA / BS / BFA. IMFA kunye.
Amava okukhenketha kunye nelayisenisi yokuqhuba i-plus.
Ukufundisa amava kunye.
IYunivesithi yasePrinceton yiNyathelo elilinganayo / umSebenzi oQinisekisiweyo wokuSebenza kunye nabo bonke abafake izicelo ezifanelekileyo baya kufumana ingqalelo kwingqesho ngaphandle kobudala, ubuhlanga, umbala, inkolo, isondo, isondo, isini, ubungqina besini okanye i-expression, imvelaphi yesizwe, isimo sokukhubazeka, ukukhusela isimo sobudala, Okanye nayiphina impawu ekhuselwe ngumthetho. I-EEO YOMTHETHO
Iiyure eziValayo zeeVeki
Ishedyuli yoHlelo, ukuba ezinye zize zifike kwiiyure eziqhelekileyo
Iimpawu kunye neveki ziquka
Ulungelelwaniso lwexesha elide
Abasebenzi beeNkonzo ezibalulekileyo (bona umgaqo-nkcukacha)
Uvavanyo lweMpilo oluFunwayo olufunekayo
Injini yeVidiyo	2017-05-25
Previous: I-PSA ene-Touch yasekhaya: i-BC Hydro
next: Naphi na iTV ikhetha i-QYOU inkonzo entsha ye-OTT kwi-Latin America
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso kuwe: "Injini yezandi". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/sound-engineer-6/. Enkosi.